Ọnụ Marcom: Nhọrọ ọzọ na Ule A / B | Martech Zone
Ọnụ Marcom: Nhọrọ ọzọ na Ule A / B
Wednesday, July 22, 2015 Tuesday, July 21, 2015 Michael Grigsby kwuru
Ya mere, anyị na-achọ ịma mgbe niile ala (nkwukọrịta ahịa) na - arụ ọrụ, dịka ụgbọ na maka mkpọsa mmadụ. Inyocha marcom ọ bụ ihe iji iji nyocha A / B dị mfe. Nke a bụ usoro ebe ihe nlele na-ejikọ mkpụrụ ndụ abụọ maka ọgwụgwọ mkpọsa.
Otu cell na-enweta ule na cell nke ọzọ agaghị. Mgbe ahụ a na-atụle ọnụego nzaghachi ma ọ bụ ngbata n ’etiti sel abụọ ahụ. Ọ bụrụ na cell test ahụ karịa cell na-achịkwa (n'ime usoro nyocha nke mbuli, obi ike, wdg).
Gịnị Mere I Ji Mee Ihe Ọzọ?
Agbanyeghị, usoro a enweghị ọgbọ nghọta. Ọ na - ebuli ihe ọ bụla, rụọ ya na agụụ, ọ nweghị ihe ọ pụtara maka atụmatụ na enweghị njikwa maka nsogbu ndị ọzọ.
Nke abuo, otutu mgbe, a na-emetuta ule a n'ihi na opekata mpe otu n'ime sel ndị ahụ anatawo onyinye ndị ọzọ, ozi ozi, nkwukọrịta, wdg. Ugboro ole ka elere nsonaazụ ule ahụ na-enweghị isi, ọbụlagodi na-enweghị isi? Ya mere, ha na-anwale ugboro ugboro. Ha amụtaghị ihe ọ bụla, belụsọ na nnwale ahụ anaghị arụ ọrụ.
Ọ bụ ya mere m ji akwado m iji iji ndagharị nkịtị na-achịkwa ihe ndị ọzọ. Mweghachi usoro na-enyekwa nghọta maka ọnụ ahịa marcom nke nwere ike iwepụta ROI. Emeghi nke a na agụụ, ma na-enye nhọrọ dịka pọtụfoliyo iji bulie mmefu ego.
Ka anyị kwuo na anyị na-anwale ozi ịntanetị abụọ, nyocha vs. njikwa na nsonaazụ ahụ bịara na-enweghị isi. Mgbe ahụ, anyị chọpụtara na ngalaba akara anyị na-ezigara mpempe akwụkwọ ozi na-ezigara (ọtụtụ) ndị na-achịkwa. Emeghị mpempe akwụkwọ a (site n'aka anyị) ma ọ bụ zụta ya na ịhọrọ mkpụrụ ndụ ule na-enweghị usoro. Nke ahụ bụ, otu azụmahịa ahụ dị ka otu na-emebu emechara ozi ezipụ na mbụ mana otu nnwale – nke ewepụtara – emeghị. Nke a bụ ihe a na-ahụkarị na ụlọ ọrụ, ebe otu anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-ekwurịta okwu na ngalaba azụmahịa ọzọ.
Ya mere, kama ịnwale ebe usoro ọ bụla bụ onye ahịa, anyị na-agbanye data ahụ site na oge oge, kwuo kwa izu. Anyị na-agbakwunye, n'izu, ọnụ ọgụgụ nke ozi ịntanetị ule, akara akara na ozi ezipụ zipụrụ. Anyị na-agụnye mgbanwe ọnụọgụ abụọ iji chee maka oge, na nke a kwa ọnwa. Isiokwu 1 na-egosi a ele mmadụ anya n'ihu ndepụta nke aggregates na email ule malite na izu 10. Ugbu a, anyị na-eme ihe nlereanya:
Thedị ndọghachi azụ nkịtị dị ka nke edepụtara n'elu na-arụpụta mmepụta 2. Gụnyere mgbanwe ndị ọzọ nwere mmasị na ndị ọzọ nwere mmasị. Ihe nlezianya kwesiri ibu bu na (net) na - ewepu ego dika onwere onwe ya. Nke a bụ n'ihi na ngbata ego na-adabere na agbanwe agbanwe wee gbakọọ dị ka (net) ọnụahịa * ukwu.
Iji tinye ọnụahịa dịka mgbanwe nọọrọ onwe ya pụtara ịnwe ọnụahịa n'akụkụ abụọ nke akụkụ, nke ekwesighi ekwesighi. (Akwụkwọ m, Nchịkọta Ahịa: Nduzi Bara Uru na Azụmaahịa Ahịa, na-enye ọtụtụ ihe atụ na nyocha nke nsogbu nyocha a.) R2 gbanwere maka ihe nlereanya a bụ 64%. (Akwụsịrị m Q4 iji zere ọnyà dummy.) Emc = njikwa email na emt = email nnwale. Ihe mgbanwe niile dị mkpa na ọkwa 95%.
ọnụọgụ -949 -1,402 -2,294 12 44 77 5,039
Ihiehie 474.1 487.2 828.1 2.5 22.4 30.8
t-ruru -2 -2.88 -2.77 4.85 1.97 2.49
N'ihe banyere ule email ahụ, email ule ahụ gosipụtara email na-achịkwa nke 77 vs 44 ma dị ịrịba ama karị. Yabụ, ịza ajụjụ maka ihe ndị ọzọ, email nnwale ahụ rụrụ ọrụ. Ihe omuma a na-abia obuna mgbe emeruru data a. Ule A / B agaraghi emeputa nke a.
Isiokwu 3 na-ewere ọnụọgụ iji gbakọọ ọnụahịa marcomm, onyinye nke ụgbọ ala ọ bụla maka ntinye ego. Nke ahụ bụ, gbakọọ uru nke akwụkwọ ozi ziri ezi, ọnụọgụ nke 12 na-aba ụba site na ọnụọgụ nke ozi ezipụ ezigara nke 109 iji nweta $ 1,305. Ndị ahịa na-emefu $ 4,057. N'ihi ya $ 1,305 / $ 4,057 = 26.8%. Nke ahụ pụtara ozi ziri ezi nyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 27% nke ego net net. Na usoro nke ROI, ozi ntanetị 109 na-ewepụta $ 1,305. Ọ bụrụ na katalọgụ na-efu $ 45 mgbe ahụ ROI = ($ 1,305 - $ 55) / $ 55 = 2300%!
N'ihi na ọnụahịa anaghị agbanwe agbanwe, ọ na-abụkarị kwubiri na mmetụta ọnụahịa na-eli na mgbe niile. Na nke a mgbe niile nke 5039 gụnyere ọnụahịa, ihe ọ bụla ọzọ na-efu efu na njehie na-enweghị isi, ma ọ bụ ihe dịka 83% nke ego ntanetị.
pụtara 0.37 0.37 0.11 109.23 6.11 4.94 1
uru -7.20% -10.70% -5.40% 26.80% 5.50% 7.80% 83.20%
Ndaghachi azụ nkịtị nyere ihe ọzọ iji nye nghọta na ihu data rụrụ arụ, dịka ọ na-adịkarị na atụmatụ ule ụlọ ọrụ. Mmasị na-enyekwa onyinye maka ntinye ego yana okwu azụmahịa maka ROI. Mmetụta nkịtị bụ usoro ọzọ maka atụmatụ ọnụahịa marcomm.
Tags: ule ulealanyocha marcomnchịkọta ahịankwukọrịta ahịaSayensị Ahịamike grigsbynlaghachi azụ
Michael Grigsby kwuru
Mike Grigsby etinyela aka na sayensị azụmaahịa kemgbe afọ 25. Ọ na-ere ahịa director director na Millward Brown ma nwee ọkwá ndị isi na Hewlett-Packard na Gap. Site na ahụmịhe nke ọkachamara na-ebute ụzọ na sayensị ahịa na nchịkọta data, ọ na-achịzi usoro nyocha ahịa mkpọsa na Ebumnuche.
Wzọ 5 iji kwado ahịa na ahịa iji bulie ego
Otu esi eweputa ihe ndi ozo B2B na aruju
Jul 22, 2015 na 4:59 PM
Nice ozo ka ihe bara uru nke, Mike.
N'ụzọ ị mere, echere m na ọ dịghị ihe karịrị ndị na-ekwurịta okwu na izu tupu oge. Ma ọ bụghị ya, ị ga-enwe akpaaka-regressive na / ma ọ bụ oge-lagged mpaghara?
Jul 23, 2015 na 11: 24 AM
N'iburu nkatọ gị banyere njikarịcha n'obi, olee otu mmadụ ga-esi jiri ihe nlele a wee bulie ọwa?